Andraisoro: samy voasambotra noho ny vaky trano izy mivady | NewsMada
Andraisoro: samy voasambotra noho ny vaky trano izy mivady
Voasambotry ny polisy ny vehivavy iray voalaza fa mpamaky trano teny Andraisoro, ny asabotsy teo.
Tratra tao an-tranon’io vehivavy io avokoa ireo entana sasany very, niampy fitaovana famakiana trano toy ny « pince coupante ». « Notanana avy hatrany ny vadin’ilay vehivavy ka io indray no nanoro sy nahafahana nisambotra ny namany », hoy ny nambaran’ny polisim-pirenena, loharanom-baovao. Ireo jiolahy izay voasambotra teny Andraisoro ihany, afakomaly.
Lehilahy roa hafa koa tratra teny Anjanahary, ny 26 jona teo. Izy ireo izay nijorojoro teny amin’iny faritra iny tokony ho tamin’ny 7 ora hariva. Tsikaritr’ireo polisy mpanao fisafoana tamin’izany fa nisy antsy teny amin’ny lehilahy iray. Nitsoaka avy hatrany ireo roa lahy nony avy eo. Tsy lavitra teo, tratra ny lehilahy iray ka nanoro ny toeram-ponenan’ilay namany. Tsy tratra tao an-tranony anefa ralehilahy ka nitohy hatrany ny fikarohana azy. 30mn taorian’izay, voasambotra teny Anjanahary ihany izy.
Ankoatra izay, lehilahy iray hafa niafina tao ambadikana fiara mijanona amin’ny sisin-dalàna koa tratra teny Anjanahary, ny harivan’ny 25 jona teo. « Saika hitsoaka ralehilahy ka nosakanana avy hatrany. », hoy ny polisy. Nambarany tamin’izany fa tratra tamin’ny fisavana azy ny « fausse-clé passe partout sy clé ary tourne vis ». Fitaovana izay entin’ireo jiolahy rehefa amin’ny fangalarana fiara na moto. Natolotra ny fampanoavana, omaly, ny lehilahy.